Naya Post Nepal | एमसिसि पास गरे कुनै नेता जि’उदो रहदैन लेखेर राक्नुस ! अमेरिकाले पालेकाहरुलाई अब युवाहरु बाटै ख”तरा. (भिडिओ हेर्नुस्)
एमसिसि पास गरे कुनै नेता जि’उदो रहदैन लेखेर राक्नुस ! अमेरिकाले पालेकाहरुलाई अब युवाहरु बाटै ख”तरा. (भिडिओ हेर्नुस्)
एमसिसि पास गरे कुनै नेता जि”उदो रहदैन लेखेर रा’क्नुस ! अमे रि काले पालेकाहरुलाई अब युवा हरु बाटै ख”तरा. भिडियो हेर्नू लाई समाचारको अन्तमा जानुहोस
याे पनि,,निकै समय अघिबाट च’र्चामा रहेको MCC को बारेमा बह स च”र्किँ’दै गै रहेको छ । MCC पा’स गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा स’त्तारू’ढ दल र प्रतिपक्ष दल भित्रै दुई मत दे’खिएको छ । केही दि न अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले MCC लाई पत्र लेखे पछि भने जन स्त’रमा पनि यसबारे नि’कै ब’हस हुन थालेको हो । यद्यपि बहस नि’कै च’लेको भएता पनि यस विषय सं’सदमा भने टेबल हुन सकेको छैन ।
सभामुख अग्नि सापकोटा MCC को वि’पक्षमा रहेकाले उनले यो विषय सं’सदमा पेश हुन नसकेको धेरैको बु’झाई छ । प्रमु’ख राज नैतिक दलहरुले यस बारेमा आफ्नो स्प’ष्ट धा’रणा बा’हिर न’ल्याए पनि ति दलका प्रमुख नेताहरु भने पक्ष विपक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन ।
तर साना दलहरुले भने यसबारे आफ्नो स्पष्ट धा’रण रा’खी सकेका छन । MCC को वि’पक्षमा रहेका साना दलहरु एक जुट भएर बिरो ध कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन । यसैबिच बिप्लव नेतृत्वको क’म्यु निस्ट पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरुले काठमाडौँमा संयुक्त बि’रोध र्या’ ली गरेका छन ।
माइतीघर मण्डलाबाट सु’रु भएको र्यालि बा’नेश्वर पुगेर कोण सभा मा परिणत भएको थियो । कोणसभामा बोल्ने बक्ताहरुले MCC पास गर्न खोजिए देश पुन द्व’न्दमा फस्ने चे”तावनी दिएका छन । अ मेरिकाले दिएको ५५ अर्ब रुपैयाँमा देस बेच्न खोजिएको उनिहरुले आरोप लगाएका छन । उर्जा लगायतका क्षेत्रमा ख’र्च गर्नु पर्ने MCC का बुदाहरुमा उल्लेख छ ।
तर उक्त स”म्झौताका कतिपय बुदाहरु बि’बादास्पद भएको भन्दै पास गर्न नहुने उनिहरुले बताए । इन्डोप्यासेफिक अन्तर्गत द’क्षिण एसियामा अमेरिकाले क’ब्जा गर्ने रणनीति भएको उनिहरुको बु’ झाई छ ।
लेण्डुप दोर्जेले जनमतबाटै सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराएको भन्दै MCC पनि सोही प्रकारको हुने उनिहरुको बु’झाई छ । संस दबाट पास गराएर कानुनी आधारमा अमेरिका बलियो बनेर घुस्न खोजेको उनिहरुले बताए । साथै प्र’मुख दलका नेताहरु लेण्डुप दो र्जे हुन तयार देखिएको पनि उनिहरुले बताए ।
तर जनता त्यसको वि’रु’द्ध खडा हुने उनिहरुको दाबी छ । त्यसका लागि जस्तो सुकै कदम उ’ठाउन पनि पछि नहट्ने उनिहरुले चेता वनी दिएका छन । MCC पास भए अर्को र’क्त’पा’त हुने उनिहरुले चे’ताव’नी दिएका छन ।
जनाताले गर्ने आ’न्दोलनलाई कम नस’म्झिन पनि उनिहरुले चेताव नी दिएका छन । ०६२/६३ को आ’न्दोलनले वर्षौ पुरानो स’त्ता पनि ढालेको भन्दै जनताको इच्चा बि’परित काम गरे MCC पक्षधर हरु केही क्षण पनि नटिक्ने उनिहरुको भनाई छ ।
०६२/६३ को आन्दोलनलाई खि’शी गर्नेहरु नै अहिले त्यही आन्दोलनको उ’पलब्धि खाएर बसेको उनिहरुले ब’ताए । MCC को पैसा खाएर देश प्रती नै गद्दार गर्न अहिलेका प्र’मुख ने’तृत्व रहेको भन्दै उनिहरुलाई जरै देखि फ्या’क्न ज’रुरी भएको उनिहरुको भनाई छ ।
२०७८ फाल्गुन १, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 199 Views